OMG! सेक्स पावर बढाउने इन्जेक्शन लिएपछि प्रेमी फरार, युवतीकाे मृत्यु - Everest Dainik - News from Nepal
OMG! सेक्स पावर बढाउने इन्जेक्शन लिएपछि प्रेमी फरार, युवतीकाे मृत्यु
मुम्बई । महाराष्ट्रको भिन्वडीमा एउटा अनौठो घटना घटेको सार्वजनिक भएको छ । भिन्वडीको एउटा होटेलमा एक युवतीकाे मृत्यु भएकाे छ । शव पोष्टमार्टमका क्रममा उनको मृत्यु सेक्स पावर बढाउने औषधिको ओभरडोजका कारण भएको पुष्टी भएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
याे पनि पढ्नुस एकता मञ्च भारतद्वारा शोक व्यक्त
ट्याग्स: India, Sex power Highdose